Semalt Expert Anotsanangura Matanho Okudzivirira Ransomware Infections
Chimwe chezvinhu zvinotyisa kukuvadza kombiyuta ndechekushaya malware. Imwe muenzaniso wakanaka ndeye CryptoLocker malware iyo yave iri nhamo kuvashandi veIndaneti kwekanguva ikozvino. Kusvikira mwedzi mishomanana yapfuura, nyanzvi dzakanga dzisingagoni kunyatsogadzirisa kugadzirisa dambudziko racho. Irojekiti yakavhara vanhu vanopfuura hafu yemamiriyoni kubva mumitambo yavo. Hurumende pamwechete nedzimwe nyanzvi dzekuchengetedza dzakakwanisa kuderedza kutyisidzira, uye vashandisi vepaIndaneti vanogona kuzorora zvino nyore. Izvo hurumende yakaita ndeyokuti vakabata makombiyuta ose anotenda kuti ndiyo inobva kune iyo malware - transparent phone logo white. Gare gare, kambani yeT IT yakagadzira chigadzirwa chavakaita kuti vanhu vashandiswe nevanhu vakanga vane makombiyuta avo vane utachiona. Chinangwa chayo chekutanga chaiva kubvisa zvinyorwa zvinopisa moto uye kuwana mafaira avo akarasika.
Oliver King, nyanzvi yekutungamirira Semalt Dhijita Dhijitori, yakurukura dzimwe nyaya dzinokurudzira dzichakubatsira kudzivisa kudzivirira kununura kununura.
Kunyange zvakadaro, vazhinji vevashandisi veIndaneti vane dambudziko rimwe chete ravanofunga nezvazvo, CryptoLocker haisi muga woga. Kune mimwe malware yakafanana inotenderera paIndaneti, nevanokuvadza vachienderera mberi kukura zvakawanda pane bhizinesi rezuva nezuva. Somuenzaniso, mushure mekutora pasi CryptoLocker, CryptoWall, yakatora nzvimbo yayo. Iro rudzikinuro rwakange rwuripo kubva munaNovember 2013. Kubva panguva iyo, maPC anopfuura 625,000 ane zera rinopfuura 5..25 mabhiriyoni emafaira akawira pasi. Rudzikinuro harusi rwakaoma se CryptoLocker mune zvigadziriswe uye kodhi yekodhi asi hazviiti kuti zvive zvisingatyi.
Apo CryptoWall inopinda mukombiyuta yakachena, inoongorora mafaira ose zvino inoshandisa RSA encryption kuti inyore. Kana zvichinyatsogadzikana zvachose muhurongwa, inovhura bhuku remashoko ekunyora nemashoko akasiyana-siyana pamusoro pekuti muridzi angakwanise sei kushandira service decryption. Iyo nzira ichaita, zvechokwadi, inosanganisira kubhadhara kwebasa racho. Pachinyore, mapurogiramu ekudhindwa anotanga paDD 500 uye achikwira kuDH $ 1000 mushure mamazuva manomwe. Mirayiridzo inoratidza kuti chete kutengesa kunogamuchirwa kune mhando ye bitcoins uye nekero yekubhadhara kuchinja nemunhu wese ane utachiona.
Nhanho gumi nhatu dzinotevera dzinoratidza nzira iyo vashandi vanogona kuzvidzivirira kubva pakudzikinura dzakadai se CryptoLockker uye CryptoWall sezvo vose vari vaviri vari muboka re insidious ransomware mhuri.
Ziva nguva dzose kuti uratidze hurongwa hwekushanda nekuchengeteka kwepurojekiti inoshandiswa kuwana internet.
Chengetedza ruzivo rwehurongwa nekutsvaga mune zvidziviriro zvekudzivirira uye zvishandiso zvekugadzirisa njodzi dzakadai sePavis Backup.
Usanamatira pane zvinyorwa zve email zvakatumirwa nevanhu vasingazivikanwi uye tarisa kune avo vakaita kuti vaite savanenge vachibva kune vanotumirwa vanotumirwa.
Chengetedza ruzivo rwakakosha mune imwe nzvimbo isina kuchengetedzwa nguva dzose.
Cloud services inowanikwa nemitsva yekutsvaga inopa kuchengeteka kwakakwana, uye semushandisi, munhu anofanirwa kufunga nezvekutamisa ruzivo rwavo kwavari.
Kupindura kwezviitiko uye kugadzirisa zvinoshandiswa zviripo kubatsira mabhizimisi kucherechedza zvirwere.
Mapurogiramu epurogiramu kuti aone mukana wehutachiona. Kana purogiramu ichiratidza kuti ingangotyisa, taurirana nekambani yeTIT nokukurumidza.
Uyewo, nguva yakazara nhoroondo uye nhepfenyuro yeshoko rekuchinja inoderedza njodzi yehutachiona apo munhu anobvisa urongwa kubva mumutambo.
Chivhara kana kubvisa chero .exe mafaira akatumirwa pamusoro pe emails, kana kushandisa anti-spam filtering system.